webka faktisk.no oo beeniyay war been abuur ah oo laga sameeyay qoys soomaali ah - NorSom News
webka faktisk.no oo beeniyay war been abuur ah oo laga sameeyay qoys soomaali ah
Maalmihii ugu danbeeyay waxaa barta bulshada ee Facebooga aad loo qeybinayay qoraal uu soo dhigay qof adeegsada bartaas, kaas oo lagu sheegayay in qoys soomaali ah ay telefoon ku iibsadeen lacag gaareyso 59.000, ayna lacagtaas bixisay hey´adda Nav.
Webka faktisk.no oo ah web hubiya, isla markaana baara oo ka daba taga wararka la shakisanyahay jiritaankooda ayaa baaritaan kadib xaqiijiyay inaysan jirin wax xaqiijinaya jiritaanka warkaas. Waxeyna xiriir la sameeyeen shirkada iibisa alaabta Elektroniga ee Power, taas oo xaqiijisay inay jirin lacag intaas le´eg oo mobilo hal mar looga wada iibsaday.
Sheekadan ayaa loo badinayaa inuu soo bandhigay qof adeegsanaya profil been ah oo facebooga ah, waxaana markii hore lagu qeybiyay guruub ay adeegsadaan dadka kasoo horjeedo soo galootiga. Waxaana markii danbe qeybiyay dad kor u dhaafaya kun qof, iyada oo laga dhiibtay boqolaal commenti oo u badnaa cey ku wajahan soomaalida iyo soo galootiga guud ahaan. Dadka sheekadan aan jiritaankeeda la hubin sii qeybiyay ayaa waxaa kamid ah rag sanadkii lasoo dhaafay u sharaxnaa kamid noqoshada baarlamaanka Norway.
Xigasho/kilde: NRK/FAKTISK.NO(HALKAN KASII AKHRI)
Previous articleNorway oo 450 milyan ugu deeqeyso Soomaaliya
Next articleDagsavisen: Soomaali ka been sheegay aqoonsigiisa oo 120 maalmood oo xabsi ah lagu xukumay
Isbadal lagu sameeyay adeega boostada Norway: Labadii maalinba, hal mar.
Norway: Qoxootigan ayaan mudnaan iyo tixgalin gaar ah siin doonaa.
Xiligan ayuu dhaqangali doonaa shardiga luuqada ee qaadashada dhalashada Norway.
Keydka NorSom Velg måned juli 2020 (8) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (78) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (62) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (40) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)